9 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney Kasta Ay Ninkeeda Ugu Sameyso Guriga Si Jaceylku U Kordho - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»9 Waxyaabood Oo Ay Tahay In Haweeney Kasta Ay Ninkeeda Ugu Sameyso Guriga Si Jaceylku U Kordho
Haweeneydu wado dheer ayay u mari kartaa si hooygeeda ay uga dhigto guri farxad leh. Waxaa jiraan waxyaabo badan oo ay sameyn karto oo farxad galinayaan ninkeeda isla markaana keenayaan inuu si weyn usii jeclaado xaaskiisa.
1. Sameey inuu guriga ugu yimaado cunto wanaagsan. Kani waa dhaqan soo jireen ah laakiin si layaab leh u shaqeyn doona hadda iyo mustaqbalka.
Nin gaajeysan oo guriga markii uu ku noqdo ugu taga cunto caraf badan oo macaan, waxaa hubaal ah inuu ku jeclaan doono toban jeer inkabadan sidii hore.
2. Waji farxad leh oo kaliya ayaa sameyn kara soo jiidasho. Isku day inaad wajigaas farxadda leh ku yeelatid guriga; ha noqon haweeney qeylo iyo wareer badan. Ka dhig wajigaaga mid dhoolacadeeya, ninkaaguna wuxuu dareemi doonaa inay raaxo tahay la joogaaga.
3. Ku dar udgoon. Isticmaal waxyaabaha udgoon sida barafuunka sababtoo ah waxaayabahaas waxay keenayaan inuu ninkaaga aad kuusii jeclaado. Ma jiro nin iska deynaya haweeney nadaafad leh oo iyada iyo gurigeeduba carfayaan.
4. Isqurxi markaad guriga joogtid. Muuqaalkaaga iyo jirkaaga ka dhig kuwo soo jiito isla markaana uu ku farxo.
5. Ha noqon qof aanan hadlin oo aamusan. La-kaftan gacaliyahaaga oo abuur jawi saaxiibtinimo.
6. Isbar inaad cod macaan oo kalgaceyl iyo soo jiidasho leh aad kula hadasho ninkaaga markaad guriga joogtaan si aad usoo jiidatid.
7. Mar mar la daawo ciyaaraha uu xiiseeyo iyo xittaa inaad la soo damaashaado.
8. Mararka qaar sameey waxaad uga farxineyso isagoo aanan kaa fileyn kadis uga dhig. Haddii aadan adiga u sameyn wuxuu ku farxo ama uu jecelyahay, yaa kale oo u sameynaya?
9. Noqo qof ay fududahay in waqti farxadeed iyo jawi macaan lala qaato. La sheekeyso ninkaaga hana noqon qof caro fudud.
Markaad guriga la joogto ninkaaga, haweeney noocee ah ayaad tahay?